Iva nemubvunzo E-Mail Us [email inodzivirirwa]
Kana iwe usina account account ndapota nyoresa
Ingia muakaunti yako
Shandisa email yako kuti upinde
Kana uine akaundi yako, ndapota pinda
Shandisa email yako kunyoresa
Yako Iine 0 Chinhu Mungoro Yako
Kutengeswa kwemishonga yemishonga ibhizimusi hombe rine vakawanda vane mukurumbira uye vakavimbika vatengesi nevatengesi. Kune akawanda marudzi ezvigadzirwa zvemishonga zvakazara zvatinotengesa kune vatengi pasi rese kusanganisira zvigadzirwa zveSkin care, inonyorwa zvinodhaka se Opioids, manapukeni anoraswa, mishonga inorwisa mabhakitiriya nezvimwe zvinhu zvekurapa. Mitengo yezvigadzirwa izvi inosiyana zvichienderana nehuwandu hwakarairwa, nzvimbo yekutumira uye mamiriro evatengi.
Isu tinopa zvakaenzana masevhisi ekubvunzana pamhepo tichitarisa pane zvigadzirwa nemasevhisi atinopa uye kuti vangakubatsira sei zvirinani. Kutenga zvigadzirwa zvemishonga pamhepo kubva kuzvitoro zvisingazivikanwe kune njodzi nekuti hauwanzo kuve nechokwadi chemhando yechigadzirwa chauri kuwana. Pano paGlobal Medicals®, tinobata chete nezvigadzirwa zvemishonga zveGrade A, zvisina kuvhiringwa uye hupombwe. Isu tinogara tichipa vatengi vedu zano remahara uye matipi ekuti ungaona nani mupi wekutengesa akakwana uye maitiro ekutenga online kuti uve nechokwadi chekuti unowana izvo zvaunenge waraira.
Pamusoro peiyo mutsara wemhando yezvigadzirwa zvemishonga zviripo zvino kutengeswa muzvitoro uye uwandu huwandu.
Global Medicals® inopa vatengi vemazuva ano uye venguva yemberi emahara ekubvunzana nezvekurapa masevhisi.
Isu tinopa yakasarudzika yakasarudzika masevhisi ekurapa, anoshuviwa zvakanyanya uye anotsvakwa.
Wana zvichangobva kuitika zvekurapa nezvimwe kubva kublog redu, uchisimbisa zvigadzirwa zvemishonga nezvimwe.
Na- Milton Ford
Iyo Indasitiri Yemishonga muna 2021 Ichaita Sei kuNew Technologies?
Muna 2021 iyo indasitiri yemishonga ichave nzvimbo yakasiyana chaizvo nezvairi ikozvino. Zvaita sei
Kutenga Sei Kubva Kunzvimbo Yemishonga
Izvo hazvina basa kuti unogara kupi muUnited States, zviri mune zvese zvingangoita kuti iwe uchave
Zvakanakira Opioid Mishonga
Zvinogona kunge zvichiedza iwe kana mudiwa wako kuti anyore maopioid ekurapa kurwadziwa kusingaperi. Asi
Tora zvigadziriso zvezvino pazvigadzirwa zvedu zvemishonga, zvibvumirano zvehorese uye mabhonasi paunosaina.
Global Medicals® inotungamira pasi rese mukutengesa nekugovera zvigadzirwa zvemishonga, zvekurapa uye mabasa ekurapa.